Wararka - Xarunta Kiimikada Furfural
Furfural (C4H3O-CHO), oo sidoo kale loo yaqaan 2-furaldehyde, oo ah qofka ugu caansan qoyska furan iyo isha laga helo furanka kale ee farsamada muhiimka u ah. Waa dareere aan midab lahayn (dhibic karkaraya 161.7 ° C; culeys gaar ah 1.1598) oo ku xiran madoobaadka hawada. Waxay ku milmaysaa biyaha illaa heerka 8.3 boqolkiiba 20 ° C waana gebi ahaanba khaldan tahay khamriga iyo ether.
Muddo ku dhow 100 sano ayaa calaamadeysay muddadii laga soo helay furfural-ka shaybaarka illaa wax soo saarkii ugu horreeyay ee ganacsi ee 1922. Horumarinta warshadaha ee soo socdaa waxay tusaale fiican u tahay ka faa'iideysiga warshadaha haraadiga beeraha. Corncobs, qolof boorash, qolof cudbi ah, qolof bariis, iyo bagasse ayaa ah ilaha ugu muhiimsan ee alaabta ceyriinka ah, oo sanadlaha lagu buuxiyo taas oo hubineysa sii socoshada. Nidaamka wax soo saarka, waxyaabo badan oo ceyriin ah iyo milix sulfuric acid ayaa lagu uumi karaa cadaadis ku jira dheef-shiideyaasha waaweyn ee wareega. Furfural-ka la sameeyay ayaa si isdaba joog ah looga saarayaa uumiga, wuxuuna ku uruurinayaa muxaadaro; distillate, uumiga, wuxuu u kala baxaa laba lakab. Lakabka hoose, oo ka kooban dhogorta qoyan, waxaa lagu qalajiyey wasakhda faaruqinta si loo helo furfural ugu yaraan boqolkiiba 99 nadiif ah.
Furfural-ka waxaa loo isticmaalaa inuu yahay dareeraha xulashada ee sifaynta saliidaha saliidda iyo rosin, iyo inuu hagaajiyo astaamaha shidaalka naaftada iyo kaydka dib-u-warshadeynta kalluumeysiga. Waxay u shaqeysaa si ballaaran soo saarista giraangiraha iskudhafan ee isku-xidhka ah iyo nadiifinta butadiene ee loogu baahan yahay soo saarista caag-gacmeed. Soosaarka nayloonku wuxuu u baahan yahay hexamethylenediamine, kaas oo furfural-ku yahay il muhiim ah. Uumiga fenolku wuxuu siiyaa furfural-phenolic resins adeegsiyo kala duwan.
Marka uumiga dhoobada iyo haydarojiin laga gudbo hawo naxaas leh heerkulka sarreeya, aalkolada furfuryl ayaa la sameeyaa. Ka-soo-bixintan muhiimka ah waxaa loo isticmaalaa warshadaha caagga ah ee loogu talagalay soo-saarista dallacyada u adkaysta daxalka iyo walxaha la shubay. Hydrogenation-ka la midka ah ee khamriga furfuryl ee ka sarreeya maaddada 'nickel catalyst' ayaa siisa khamriga tetrahydrofurfuryl, kaas oo laga soo dhejiyay esters kala duwan iyo dihydropyran.
Falcelinteeda sida aldehyde, furfural waxay u egtahay xoog benzaldehyde. Sidaa darteed, waxay ku dhacdaa falcelinta Cannizzaro ee alkali aqueous xoog leh; waxay yareysaa furoin, C4H3OCO-CHOH-C4H3O, iyadoo ay saameyn ku leedahay cyanide-ka potassium; waxaa loo rogay hydrofuramide, (C4H3O-CH)3N2, ficilka ammonia. Si kastaba ha noqotee, furfural waxay si weyn uga duwan tahay benzaldehyde dhowr siyaabood, kuwaas oo autoxidationku tusaale u noqon doono. Marka hawada la gaadho heerkulka qolka, furfuralka waa la duleeyaa oo waxaa lagu dhejiyaa formic acid iyo formylacrylic acid. Furoic acid waa cad cad oo adag oo waxtar u leh bakteeriyada iyo ilaaliyaha. Etsers-keedu waa cabitaanno udgoon oo loo isticmaalo maaddooyinka ku jira cadarka iyo kuwa udgoon.
Waqtiga boostada: Aug-15-2020